Home Wararka Gudaha Muxuu Madaxweyne Xasan ka sheegay kulankii xildhibaannada labada Aqal?
Madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay kulan casho ah u sameeyey xildhibaannada labada Aqal ee baarlamaanka federaalka, kaas oo ka qabsoomay xarunta Villa Soomaaliya.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday shaqada hortaallo dowladdiisa cusub, wuxuuna ballan-qaaday inuu halka ay joogto kasii wadi doono dowladnimada Soomaaliya
Waxaa na dilay wax walba gadaal halaga soo bilaabo iyo waa markii ugu horaysay, waxaan leennahay annaga waan ka ducaysanay waa markii ugu horaysay. Wixii soo socday ee naga horreeyay waa sidii loo qabtay. Wixii noo harsan oo la qaban waayayna waan ku guulaysanaynaa,” ayuu markale khudbaddiisa ku yiri Madaxweynaha dowladda Soomaaliya.
Dhinaca kale wuxuu si adag uga hadlay arrimaha soo gelista shaqada xafiisyada dowladda, isaga oo sheegay in tallaabo ay ka qaadi doonaan mas’uuliyiinta kasoo dib dhacda shaqada xafiiska, isla-markaana ay ku muteysan doonaan xilka qaadis, sida uu hadalka u dhigay
Waxaa la maqli doonaa mas’uul hebel ayaa xilka looga qaaday waqtiga uu xafiiska soo xaadiri waayey. Qofkii dhowri waaye, canshuurta dadka Soomaaliyeed, isagana lama dhowri doono,” ayuu sii raaciyey.
Previous articleNabaddoon Maanta lagu dilay Magaalada Muqdisho
Next articleBaarlamaanka Soomaaliya oo qaadayo tallaabo la xiriirta kiiska Ikraan Tahliil Faarax